mars 2018 - Page 49 sur 95 -
Fifa sy Caf : Tonga hijery ny tsy fanarahan-dalàn’ny FMF
14/03/2018 admintriatra 0
Nigadona teto Madagasikara omaly ireo delegasiona avy amin’ny Federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra na Fifa sy ny Kaonfederasiona Afrikanin’ny baolina kitra na Caf, ahitana an-dramatoa Segbé Pritchett sy ingahy Véron Mosengo-Omba ary i Luca Nicola. Raha …Tohiny
Andian-drahona Avaratra Atsinanana : Hahakasika an’i Madagasikara
Miha mivoatra hatrany ilay andian-drahona any Avaratra atsinanan’ ny Nosy. Omaly maraina, tany amin’ny 830 km Avaratra atsinanan’i Antalaha ny foibeny ka rahampitso alakamisy no vinavinaina hahazo anarana sy hahafeno ny fepetra rehetra maharivo-doza azy …Tohiny
Hisantatra ny fiakarana an-tsehatra. Fanomezana fahafaham-po ireo mpankafy no nifidianan’ny tarika Ambondrona an’Antsahamanitra. Seho indroa miantoana hotanterahina ny 24 sy ny 25 marsa izao. « Tsy mitsahatra ny mitombo ireo mpankafy ny tarika Ambondrona , ary …Tohiny
Andiany faha-5 : Hosantarina amin’ny « Bal masqué » ny hetsika ho an’ny gitara
Mikaroka zava-baovao hatrany. Hotanterahina ny 6 ka hatramin’ny 15 avrily izao ny andiany faha-5 amin’ny hetsika ho an’ny gitara na ny « Festival de guitare ». Hiavaka izany amin’ity taona ity satria dia ho santarina amin’ny alim-pandihizana …Tohiny
« 1 … 47 48 49 50 51 … 95 »
Ny taona 1991 no nanomboka nisian’ny kidnapping teto amintsika, ka ireo teratany Karana mizaka zom-pirenena no lasibatra tany am-boalohany. Mahatratra 112 ny isan’ireo Karana nisy naka an-keriny nanomboka ny taona 1991, ary amina miliara hatrany ...Tohiny